He – Page2– NOe
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ရွှေပိုးမွေးနေ့……
အဖွားရယ် ၊ ဘူးသီးရယ် ၊ရွှေပိုးရယ် ကိုခေါ်ပြီး ကိုထွန်းလင်းနဲ့ ဘုရားသွားတယ်။
ဒေဝါလီနေ့မို့ လူအရမ်းများတော့ အဖွားက စိတ်တိုတယ်။
ပြီးတော့ M3 မှာ ဒင်းဆမ်းသွားစားကြတယ်။ ကထွင်းက ရွှေပိုးကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီး မနက်စာကျွေးတယ်။
မနက်စာစားပြီးတော့ အဖွားကိုအိပ်ပြန်ပို့ပြီး လှော်ကားသွားကြတယ်။ လမ်းမှာ ဂျေဒိုးနပ်တွေဝင်စားကြသေးတယ်။
ရန်ကုန်မှာနေလာတာ ၂၅ နှစ်လောက်ရှိနေပြီ လှော်ကားကိုတစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူး။
တောအုပ်ကြီးမှာ နေ့တိုင်းနေရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးပြီး … ပိုက်ဆံတွေပိုရှာရမယ့်အကြောင်းက ပိုပိုခိုင်မာလာတယ်။
ဘဝမှာ အချစ်လည်းရှာစရာမလိုတော့ဘူး။ ပညာရှာဖို့လည်း သိပ်အရေးမကြီးတော့ဘူး။ ပိုက်ဆံရှာစရာပဲရှိတော့တယ်။ ပိုက်ဆံတွေအများကြီး ရရင် ရသလောက်ရှာရမယ်။ ကြိုးစားရှာရမယ်။
လှော်ကားကပြန်တော့ စစ်သချိုင်းဝင်ကြတယ်။ပြီးတော့ အိုအီးရှီ မှာ ဆူရှီသွားစားကြတယ်။
တနင်္လာနေ့က ရုံးပိတ်ရက်ပေမယ့် ရုံးတက်ရတယ်။ အဲဒီနေ့က Project အသစ်တစ်ခုအတွက်လက်မှတ်ထိုးတယ်။တကယ်တော့ အဲ့ Project ကို လက်မှတ်ထိုးချင်လို့စောင့်နေတာ ၆ လလောက်ရှိနေပြီ။အခုမှပဲထိုးဖြစ်တာ။
မနေ့က မစန္ဒီ နဲ့ ကိုအမရ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးတယ်။
ရာသီဥတုက ပူပေမယ့် လှလှပပလေးပွဲတက်ပေးချင်လို့ မိတ်ကပ်တွေလိမ်းပြီး ဆံပင်တွေပါသွားပြင်လိုက်တယ်။
သူတို့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေ့ မလိုက်ပေးနိုင်လိုက်လို့ မနေ့ ပွဲပြီးတဲ့အထိနေတဲ့အပြင် ပွဲပြီးလို့ မီးဆိုင်းသွားဝယ်တာတွေပါလိုက်ပေးလိုက်တယ်။
၂ ယောက်စလုံးက လှပပျော်ရွှင် ကြည်နူးဝမ်းသာ နေလိုက်ကြတာများ….မြင်ရသူတွေအတွက်ပါပျော်စရာကြီးရယ်။
Posted in He, PeopleLeaveacomment
မင်္ဂ လာဆောင်ပြီးလို့ သမီးလေးမွေးရင် “သုံးပန်လှ”လို့နာမည်ပေးမယ်တဲ့။ “ဘာလို့လဲ”ဆိုပြီးမေးတော့ “မောင်ကိုဦးလိုပဲအရွယ်သုံးပါးနာမည်လေ”တဲ့။
သဘောကျတယ်။ အိမ်မှာခေါ်ရင် “အလှ”လို့ခေါ်မယ်။
မနေ့က အရမ်းပင်ပန်းတော့ ကန်တော်ကြီးကို တစ်ပတ်ပဲပတ်နိုင်တယ်။
ဒီနေ့လည်းမနက်အစောကြီးထပြီး မြောင်းတကာဖက်က စက်ရုံတစ်ရုံဆီပြေးရသေးတယ်။
မနက်နိုးနိုးချင်း မစန္ဒီဆီ Message လှမ်းပို့လိုက်သေးတယ်။
တကယ်တော့ကိုယ်တိုင်သွားပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲချင်တာ။ အလုပ်တွေများနေတာနဲ့ မသွားဖြစ်လိုက်ရတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်ချစ်တဲ့သူ ၂ ယောက်ပေါင်းဖက်ကြလေသတည်းမို့ ဒီနေ့ဟာ ဘဒ္ဒကမ္ဘာအတွက် မင်္ဂလာ ရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲ။
I’m happy for them ပါ။
စက်ရုံသွားတဲ့လမ်း ကလမ်းဘေးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာ မနက်စာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဝင်စားတာ ဘာကောင်းသလဲမမေးပါနဲ့။
နောက်ဆုံးအချိန်ထိအဆင်ပြေပြီး Project အကြီးကြီးထပ်ရရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။
အဖွားကတော့ ပြောရှာတယ်”ပိုက်ဆံကိုကောင်းကောင်းရှာပြီး သေချာထိန်းသိမ်း။ကိုယ့်မှာရှိမှအဆင်ပြေမှာ သူများအားကိုးလို့မရဘူး”တဲ့။
နေ့တိုင်း ညနေရုံးဆင်းရင် သူ့အိမ်မှာကားသွားထား၊ ပြီး၂ ယောက်သားလမ်းလျှောက်ထွက်၊ ပြန်လာရင် သူချက်ထားတဲ့ထမင်းဟင်း အလိုက်သင့်လေးစား။ တစ်ခါတစ်ခါ ဦးလေး(ကထွင်းအဖေ)က အသီးလေးတွေခွဲပြီးရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားပြီး အချိုတည်းဖို့ပါ စီစဉ်ပေးထားသေးတာ။
ဒီနေ့လည်း အစည်းအဝေးအပြီး ပြန်မယ်ဆိုပြီး ကားပေါ်တက်တော့ ကိုယ့်ခုံမှာ တီရှပ်တစ်ထည်ခင်းထားတာတွေလို့ မေးကြည့်တော့ “ခင်ဗျားနေရာကနေပူကျနေလို့ ထိုင်လိုက်ရင်ပူမှာစိုးလို့ ကာပေးထားတာ”တဲ့လေ။
ကိုယ့်မှာ အကြွေတစ်လိုင်း ။
Posted in HeLeaveacomment
အခုတစ္ေလာ ႏိုး စိတ္ထဲ သေဘာမေတြ႕တဲ႕ကိစၥတစ္ခုရွိတယ္။
ဘာလဲဆိုေတာ႕ ႏိုးနဲ႕ လက္ထပ္ေတာ႕မယ္႕ သတို႕သားေလာင္းကို “သားႀကီးမွားမယ္ေနာ္။” “မိုက္ေတာ႕မလို႕လား” ဘာညာနဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ (အထူးသျဖင္႕ အမ်ိဳးသားေတြအခ်င္းခ်င္း) က လာလာစေနာက္ေနၾကတဲ႕ ကိစၥပဲ။
စစခ်င္းေတာ႕ ဘာမွမျဖစ္ေပမယ္႕ တစ္ရက္လည္းမဟုတ္ ၊ ႏွစ္ရက္လည္းမဟုတ္ ၊ တစ္ခါလည္းမဟုတ္ ၊ ႏွစ္ခါလည္းမဟုတ္ အားအားရွိဒါပဲထပ္တလဲလဲၾကားရတာၾကာေတာ႕ လူကစိတ္နည္းနည္းေတာ႕ရႈပ္လာတယ္။
ႏိုးကခ်ည္း တစ္ဖက္သတ္ အတင္းအဓမၼစီစဥ္တာလည္းမဟုတ္ပါဘဲ ႏွစ္ဦးသေဘာတူလက္ထပ္ၾကမွာကို ဘာလို႕ ဒီလိုေတြလာလာေျပာၾကလဲဆိုတာေတာ႕ စဥ္းစားမရႏိုင္ဘူး။
ငါကတကယ္ကို သူ႕ဘဝအတြက္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္တစ္ခုျဖစ္သြားေတာ႕မွာလား ? ေပါ႔။
ႏိုးနဲ႕လက္ထပ္လိုက္လို႕ သူ႕ဘဝကတစ္ကယ္ကို အခ်ဳပ္အေႏွာင္ထဲေရာက္သြားမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ ႏိုးသူ႕ကို လက္မထပ္ခ်င္ပါဘူး။
၈ ႏွစ္ေလာက္နီးပါး ကိုယ္႕အနားမွာရွိလာတဲ႕ သူတစ္ေယာက္ စိတ္ဆင္းရဲမွာ ၊ ဒုကၡေရာက္မွာ ႏိုးမလိုလားဘူး။ အထူးသျဖင္႕ ႏိုးေၾကာင္႕ သူ အဆင္မေျပျဖစ္မွာ ၊ ေနာက္ဆံတင္းရမွာ ေတြ ပိုေၾကာက္တယ္။ ဒါဟာ သူ႕ကို ခ်စ္လို႕ ႀကိဳက္လို႕ ဆိုတာ ထက္ “ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမွ မျဖစ္ခ်င္ဘူး” ဆိုတဲ႕ ႏိုးရဲ႕မာနေၾကာင္႕ဆို ပိုမွန္မယ္။ ႏိုးကိုယ္တိုင္လည္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးေတြသယ္ထမ္းထားရတာကိုမႀကိဳက္ဘူး။ ဒီေတာ႕ သူမ်ားေတြကိုလည္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးေတြမေပးခ်င္ဘူး။ ဘယ္ကိစၥမွာမဆို ႏိုးကို ငဲ႕လိုက္ရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ၊ ႏိုးကို ၫွာလိုက္ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ပိုမၾကားခ်င္ဘူး။
အထူးသျဖင္႕ ႏိုးလက္ထပ္မယ္႕ေယာက္က်ားတစ္ေယာက္က အစစအရာရာ ႏိုးကို ငဲ႕ေနရတာ ၊ ႏိုးအတြက္နဲ႕တာဝန္ေတြပိုထမ္းရတာ ၊ ႏိုးအတြက္နဲ႕ သူႀကိဳက္တဲ႕ အျခားအရာေတြကို စြန္႕လႊတ္လိုက္ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးဆို လံုးဝ (လံုးဝ) မၾကားခ်င္ ၊ မျဖစ္ေစခ်င္ ၊ မရွိေစခ်င္တဲ႕ ကိစၥေတြပါပဲ။
ေနာက္ၿပီး ႏိုးတို႕ ၂ ေယာက္ရဲ႕ လက္ထပ္ျခင္းက လက္ထပ္ျခင္းသီးသန္႕ပါပဲ။
တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ မခြဲႏိုင္ေတာ႕လို႕ တို႕ ၊
မ်က္စိေအာက္ကအေပ်ာက္မခံ ခ်စ္ၾကလြန္းလို႕တို႕ ၊
အျခားဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွမရွိဘူး။ အတူရွိခဲ႕တဲ႕ ႏွစ္ေတြၾကာလို႕ အလိုလိုျဖစ္လာတဲ႕ သံေယာဇဥ္ကလြဲရင္ ဘာေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႕မွလည္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခ်ည္တုတ္ထားတာ မရွိဘူး။
ႏိုးတို႕ လက္ထပ္ခ်င္တယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႕ လက္ထပ္တယ္။
လက္ထပ္ၿပီးရင္လည္း ဘယ္သူက ဘာလုပ္ရမယ္ ၊ ဘယ္သူကေတာ႕ ဘာတာဝန္ယူပါ ဆိုတာမ်ိဳးလည္း မရွိပါဘူး။
ဥပမာ – ထမင္းခ်က္တဲ႕ကိစၥမ်ိဳးဆို သူအားသူခ်က္ ၊ ကိုယ္အားကိုယ္ခ်က္ပဲ။ ၂ ေယာက္လံုးမအားေတာ႕လည္း ဝယ္စား(ဒါမွမဟုတ္)မစားနဲ႕ေပါ႔။ ဒီလိုပဲသြားၾကမွာ။
ပြင္႕ပြင္႕လင္းလင္းေျပာရရင္ လက္ထပ္ၿပီးမွ အဆင္မေျပလည္း ႏွစ္ဦီးႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ျပတ္စဲသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ႏိုးတို႕ ၂ ေယာက္လံုး နားလည္လက္ခံထားၿပီးသားမို႕ ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ခ်ည္ေႏွာင္သြားဖို႕မရွိပါဘူး။
ေငြေရးေၾကးေရး အစ ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အဆံုး ဘာတစ္ခုမွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ အစီအစဥ္ကိုမရွိတာ။
ဒီီေနရာမွာ ေႏွာင္ႀကိဳးေလးတစ္မွ်ဥ္ေတာ႕မျဖစ္မေနထားရမယ္ လို႕ ကတ္သီးကတ္သတ္ေျပာလာရင္ေတာ႕ “သစၥာတရား”နဲ႕ေႏွာင္ဖြဲ႕ဖို႕ပဲရွိတယ္။
ဒါေပမယ္႕ ဒီသစၥာတရားကလည္း”တစ္သက္မွာ တစ္ေယာက္ပဲခ်စ္ၿပီး တစ္ေယာက္ပဲေပါင္းရမယ္ ” ဆိုတာမ်ိဳး (လံုးဝ) မဟုတ္ျပန္ဘူး။
ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တစ္ေယာက္အနားမွာတစ္ေယာက္ေနလို႕အဆင္မေျပေတာ႕တဲ႕အခါ (ဒါမွမဟုတ္) ပိုအဆင္ေျပေစမယ္႕ ေနာက္တစ္ေယာက္ရွိလာတဲ႕အခါ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ပြင္႕လင္းမွန္ကန္စြာ အသိေပးရမယ္ဆိုတဲ႕ သစၥာပဲ။
သစၥာ ဆိုတာကိုက အမွန္ လို႕ အဓိပၸာယ္ရတာေၾကာင္႕ အဆင္မေျပတာကို အဆင္ေျပပါတယ္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ဖံုးကြယ္ထားစရာမလိုဘူးေလေနာ္။
ဒီအေၾကာင္းေတြကို အခုလို ဖြင္႕ဟတယ္ဆိုတာကလည္း စေနာက္တာေတြမလုပ္ပါနဲ႕တားတာမဟုတ္ပါဘူး။
စတာေနာက္တာလည္းသူတို႕လြတ္လပ္ခြင္႕ျဖစ္သလို ၊ စိတ္သေဘာမေတြ႕တာကလည္း ႏိုးလြတ္လပ္ခြင္႕ပဲေလ။
လူတစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္အယူအဆေတြ ခံယူခ်က္ေတြမတူညီႏိုင္တာမို႕ ႏိုးတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက အျခားသူေတြအတြက္ သူစိမ္းဆန္တယ္လို႕ ထင္ခ်င္ထင္ၾကမယ္ ဆိုေပမယ္႕ အခုအခ်ိန္ထိေတာ႕ ႏိုးတို႕ ၂ ေယာက္လံုးက အဆင္ေျပေျပပါပဲ။
အတၱအရမ္းႀကီးတဲ႕ မိန္းမတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ “ကိုယ္လက္ထပ္မယ္႕ေယာက္က်ားတစ္ေယာက္ကို ကိုုယ္႕ေၾကာင္႕ စိတ္မဆင္းရဲေစရေအာင္၊ဒုကၡမေရာက္ရေအာင္ ၊ မ်က္ႏွာမငယ္ေစရေအာင္ ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ် ၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားမယ္”ဆိုတာကေတာ႕ ဘဒၵကမၻာမွာ အမွန္ကန္ဆံုးေသာ မာနလွလွတစ္ခုပဲ။
အခုတစ်လော နိုး စိတ်ထဲ သဘောမတွေ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ နိုးနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ့် သတို့သားလောင်းကို “သားကြီးမှားမယ်နော်။” “မိုက်တော့မလို့လား” ဘာညာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (အထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေအချင်းချင်း) က လာလာစနောက်နေကြတဲ့ ကိစ္စပဲ။
စစချင်းတော့ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် တစ်ရက်လည်းမဟုတ် ၊ နှစ်ရက်လည်းမဟုတ် ၊ တစ်ခါလည်းမဟုတ် ၊ နှစ်ခါလည်းမဟုတ် အားအားရှိဒါပဲထပ်တလဲလဲကြားရတာကြာတော့ လူကစိတ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်လာတယ်။
နိုးကချည်း တစ်ဖက်သတ် အတင်းအဓမ္မစီစဉ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘဲ နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ကြမှာကို ဘာလို့ ဒီလိုတွေလာလာပြောကြလဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားမရနိုင်ဘူး။
ငါကတကယ်ကို သူ့ဘဝအတွက် အချုပ်အနှောင်တစ်ခုဖြစ်သွားတော့မှာလား ? ပေါ့။
နိုးနဲ့လက်ထပ်လိုက်လို့ သူ့ဘဝကတစ်ကယ်ကို အချုပ်အနှောင်ထဲရောက်သွားမယ်ဆိုတာ သေချာတယ်ဆိုရင် နိုးသူ့ကို လက်မထပ်ချင်ပါဘူး။
၈ နှစ်လောက်နီးပါး ကိုယ့်အနားမှာရှိလာတဲ့ သူတစ်ယောက် စိတ်ဆင်းရဲမှာ ၊ ဒုက္ခရောက်မှာ နိုးမလိုလားဘူး။ အထူးသဖြင့် နိုးကြောင့် သူ အဆင်မပြေဖြစ်မှာ ၊ နောက်ဆံတင်းရမှာ တွေ ပိုကြောက်တယ်။ ဒါဟာ သူ့ကို ချစ်လို့ ကြိုက်လို့ ဆိုတာ ထက် “ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမှ မဖြစ်ချင်ဘူး” ဆိုတဲ့ နိုးရဲ့မာနကြောင့်ဆို ပိုမှန်မယ်။ နိုးကိုယ်တိုင်လည်း ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေသယ်ထမ်းထားရတာကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒီတော့ သူများတွေကိုလည်း ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေမပေးချင်ဘူး။ ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို နိုးကို ငဲ့လိုက်ရတယ် ဆိုတာမျိုး ၊ နိုးကို ညှာလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ပိုမကြားချင်ဘူး။
အထူးသဖြင့် နိုးလက်ထပ်မယ့်ယောက်ကျားတစ်ယောက်က အစစအရာရာ နိုးကို ငဲ့နေရတာ ၊ နိုးအတွက်နဲ့တာဝန်တွေပိုထမ်းရတာ ၊ နိုးအတွက်နဲ့ သူကြိုက်တဲ့ အခြားအရာတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဆို လုံးဝ (လုံးဝ) မကြားချင် ၊ မဖြစ်စေချင် ၊ မရှိစေချင်တဲ့ ကိစ္စတွေပါပဲ။
နောက်ပြီး နိုးတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်ခြင်းက လက်ထပ်ခြင်းသီးသန့်ပါပဲ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မခွဲနိုင်တော့လို့ တို့ ၊
မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံ ချစ်ကြလွန်းလို့တို့ ၊
အခြားဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူး။ အတူရှိခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကြာလို့ အလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ သံယောဇဉ်ကလွဲရင် ဘာနှောင်ကြိုးနဲ့မှလည်း ချုပ်နှောင် ချည်တုတ်ထားတာ မရှိဘူး။
နိုးတို့ လက်ထပ်ချင်တယ် ၊ ဒါကြောင့် လက်ထပ်တယ်။
လက်ထပ်ပြီးရင်လည်း ဘယ်သူက ဘာလုပ်ရမယ် ၊ ဘယ်သူကတော့ ဘာတာဝန်ယူပါ ဆိုတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။
ဥပမာ – ထမင်းချက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆို သူအားသူချက် ၊ ကိုယ်အားကိုယ်ချက်ပဲ။ ၂ ယောက်လုံးမအားတော့လည်း ဝယ်စား(ဒါမှမဟုတ်)မစားနဲ့ပေါ့။ ဒီလိုပဲသွားကြမှာ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် လက်ထပ်ပြီးမှ အဆင်မပြေလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ ပြတ်စဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို နိုးတို့ ၂ ယောက်လုံး နားလည်လက်ခံထားပြီးသားမို့ ရှေ့လျှောက်လည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချည်နှောင်သွားဖို့မရှိပါဘူး။
ငွေရေးကြေးရေး အစ ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အဆုံး ဘာတစ်ခုမှ ချုပ်နှောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ကိုမရှိတာ။
ဒီနေရာမှာ နှောင်ကြိုးလေးတစ်မျှဉ်တော့မဖြစ်မနေထားရမယ် လို့ ကတ်သီးကတ်သတ်ပြောလာရင်တော့ “သစ္စာတရား”နဲ့နှောင်ဖွဲ့ဖို့ပဲရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီသစ္စာတရားကလည်း”တစ်သက်မှာ တစ်ယောက်ပဲချစ်ပြီး တစ်ယောက်ပဲပေါင်းရမယ် ” ဆိုတာမျိုး (လုံးဝ) မဟုတ်ပြန်ဘူး။
နောင်တစ်ချိန် တစ်ယောက်အနားမှာတစ်ယောက်နေလို့အဆင်မပြေတော့တဲ့အခါ (ဒါမှမဟုတ်) ပိုအဆင်ပြေစေမယ့် နောက်တစ်ယောက်ရှိလာတဲ့အခါ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပွင့်လင်းမှန်ကန်စွာ အသိပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သစ္စာပဲ။
သစ္စာ ဆိုတာကိုက အမှန် လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတာကြောင့် အဆင်မပြေတာကို အဆင်ပြေပါတယ် ဟန်ဆောင်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုဘူးလေနော်။
ဒီအကြောင်းတွေကို အခုလို ဖွင့်ဟတယ်ဆိုတာကလည်း စနောက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့တားတာမဟုတ်ပါဘူး။
စတာနောက်တာလည်းသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်သလို ၊ စိတ်သဘောမတွေ့တာကလည်း နိုးလွတ်လပ်ခွင့်ပဲလေ။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အယူအဆတွေ ခံယူချက်တွေမတူညီနိုင်တာမို့ နိုးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက အခြားသူတွေအတွက် သူစိမ်းဆန်တယ်လို့ ထင်ချင်ထင်ကြမယ် ဆိုပေမယ့် အခုအချိန်ထိတော့ နိုးတို့ ၂ ယောက်လုံးက အဆင်ပြေပြေပါပဲ။
မာနအရမ်းကြီးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ “ကိုယ်လက်ထပ်မယ့်ယောက်ကျားတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ကြောင့် စိတ်မဆင်းရဲစေရအောင်၊ဒုက္ခမရောက်ရအောင် ၊ မျက်နှာမငယ်စေရအောင် ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားမယ်”ဆိုတာကတော့ ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ အမှန်ကန်ဆုံးသော အတ္တလှလှတစ်ခုပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့မောဟဟာ သူ့အတွက် အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်း။
သံသရာတစ်လေ ျှာက် ကျင်လည်ရဦးမယ့်
Posted in He, NOeLeaveacomment
ချစ်သူ ကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ ?
ငနိုးကတော့ တွေ့ခါစတုန်းက ဆရာလို့ ခေါ်တယ်။
နောက်တော့ ဦးထွန်းလင်း လို့ပြောင်းခေါ်တယ်။
နည်းနည်းကြာတော့ Mr.CEO လို့ခေါ်တယ်။
သမုဒ္ဒယ သစ္စာရှင် လို့လည်းခေါ်တယ်။
အရေးကြီးတာ ကိုယ်ခေါ်နေမှန်း သူသိဖို့ပဲ။
(တစ်ခုခုဆို “သည်းခံလိုက်ပါ။ မေတ္တာထားပါ။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ စိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ထားပါ။” ဘာညာနဲ့ တရားတွေချတတ်လွန်းလို့ တမင်ရွဲ့ပြီး “ဘုရားဖြစ်မယ့် အုတ်နီခဲ” လို့လည်းခေါ်တယ်။ :P)
ကိုယ့် လက်တွဲဖော် ရဲ့ တန်ဖိုးကို မသိတဲ့သူတွေဟာ ဖောက်ပြားတတ်ကြတယ်။
ယောက်ကျားဖြစ်စေ ၊ မိန်းမဖြစ်စေ လူတွေမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ မတူညီတဲ့ တန်ဖိုးလေးတွေရှိတယ်။
တစ်ချို့က လှတာကို တန်ဖိုးထားတယ် ။
တစ်ချို့က အတွေးအခေါ်မြင့်တာကို တန်ဖိုးထားတယ်။
တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ငွေကြေး ဥစ္စာတွေကို တန်ဖိုးထားတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော် (ချစ်သူ၊ရည်းစား ၊ အိမ်ထောင်ဖက် )မှာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ အချက်လေးတွေမရှိဘူးဆိုတာသိရတဲ့အခါ (ဒါမှမဟုတ်) ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါ လူအများစုဟာ ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ဦးတည်တတ်ကြတယ်။
ဒါဟာချစ်တယ် ၊ မချစ်ဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူး။
ကိုယ့်တန်ဖိုးက အတွေးအခေါ်မြင့်တာဖြစ်နေပေမယ့် တစ်ဖက်လူရဲ့ တန်ဖိုးထားရာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှအပ ဖြစ်နေတဲ့အခါ ဖောက်ပြန်ခံရဖို့များတယ်။
လက်တွဲဖော်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိပြီး အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကလည်း
အိမ်ပြန်ချိန် အိမ်အောက်ထိလိုက်ပို့တာ ၊
အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေမှာ အမှတ်တရတွေစီစဉ်ပေးတာ ၊
စသဖြင့် တွေထက် အများကြီး (အများကြီး) ပိုပါသေးတယ်။
အမှန်တကယ် တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာရဲ့နောက်မှာ လေးစားခြင်းဆိုတာကပ်ပါလာတယ်။
သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု ၊ ရပ်တည်မှု တွေကိုပါ လက်ခံနိုင်လာတဲ့ လေးစားမှုမျိုး။
သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ခံယူချက်တွေ က ကိုယ်နဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်သည့်တိုင် ထောက်ခံပေးနိုင်တဲ့ လေးစားမှုမျိုး။
သူ့ရဲ့ ကြိုက်ခြင်း ၊ မကြိုက်ခြင်းတွေကိုပါ နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ လေးစားမှုမျိုး တွေနဲ့ အမြတ်တနိုးလေးစားတာ။
အကယ်၍သာ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ဒီလိုလေးစားမှုမျိုးတွေနဲ့တန်ဖိုးထားပြီး မြတ်နိုးရကောင်းမှန်း သိတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖောက်ပြားလိုစိတ်ဆိုတာ ဘယ်ဆီနေမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီနေရာမှတစ်ခုပြောချင်တာက လောဘမကြီးဘဲ သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက် မျှကြည့်တတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။
မင်းကြိုက်တဲ့ ကော်ဖီတော့ ကိုယ်လိုက်မသောက်နိုင်ဘူး။” ဆိုတဲ့အကျင့်တွေနဲ့တော့ တန်ဖိုးထားလေးစားမှုတွေ တောင်းဆိုလို့မရဘူးပေါ့။
ဖောက်ပြန်မခံချင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်တန်ဖိုးကို သိတဲ့သူနဲ့ပဲလက်တွဲပါ။
ဖောက်ပြန်လည်း မခံချင်ဘူး ၊ ဖောက်ပြန်တတ်သူလည်း မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တန်ဖိုးသိပြီး တန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့သူအချင်းချင်း လက်တွဲပါ။
“ကိုယ့်ကိုကိုယ် လေးစားတတ်တဲ့သူတွေပဲ အခြားလူတွေကိုလေးစားရကောင်းမှန်းသိကြတာပါ။”
( ဟိုနေ့က ကိုထွန်းလင်းနဲ့ဆွေးနွေးရင်း ရလာတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးကို အခြေခံရေးလိုက်တာပါ။ အမြင်မတူတာတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။)
Posted in He, NOe, PeopleLeaveacomment
ဦးဝိစာရအဝိုင်းနားရောက်တိုင်း ကိုထွန်းလင်းကို သတိရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်က မြို့ထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့် ၊ ကြေးအိုးစားပြီး အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်တုန်း (ဘာကိစ္စနဲ့ ထငြိကြမှန်းတော့ မမှတ်မိဘူး) ငနိုးတစ်ယောက် စိတ်တွေဆိုးပြီး တစ်ယောက်တည်း ဒေါနဲ့မောနဲ့ ဆောင့်ဆောင့် ဆောင့်ဆောင့် လျှောက်သွားလိုက်တာ ဘယ်လိုကနေဘယ်လို အဲဒီအဝိုင်းပေါ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။
ကားတွေကလည်းမတရားရှုပ်နေလို့ ပြန်မဆင်းတတ်တော့မှ ကိုထွန်းလင်းဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး လာခေါ်ခိုင်းရတယ်။ 😬😬
ဖုန်းထဲကပဲ ” ဟိုနားသွား ၊ ခဏစောင့် ၊ကူးတော့” ဘာညာနဲ့ညွှန်ကြားရေးတွေလုပ်တာ။
ဘာပဲပြောပြော လူသွားလမ်းပေါ်ပြန်ရောက်လာတော့ တော်သေးတာပေါ့။ 😜
လမ်းမှာ အကြောင်းအရာစုံအောင် စကားတွေဖောင်ဖွဲ့
တစ်ခါတစ်လေ သဘောတရား ကွဲလွဲကြတဲ့အခါ ရန်လေးဘာလေးဖြစ်
ပြောရင်းဆိုရင်း လွမ်းလာပြီ။ 😬😬
နေ့လည် ၁၁ နာရီလောက် ဦးကျော်ထမင်းပေါင်း ဆိုင်မှာစောင့်ပါချစ်သူ။
အခေါက်အသားရော ထမင်းပေါင်း ၂ပွဲခွဲကို နှစ်ယောက်သား ခေါင်းမဖော်တမ်းစားပြီးတဲ့အခါ ပက်စီတစ်လုံးသောက်ချင်တယ်။နောက်ပြီး ကျွဲခေါင်းသီးစားချင်တယ် ချစ်သူ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူမှမကြားဖူးတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုစပြောပါချစ်သူ။
ဘူတာကြီးမှာဆင်းပြီး နေပြည်တော်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြမယ်။
နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ရေသန့်ဘူးကြီးလိုအပ်တယ်။နေကြာစေ့က အလုပ်ရှုပ်တယ်။ခွါပြီးသားဖရုံစေ့ ၂ထုပ်ပဲဝယ်ပါ။
ရုပ်ရှင်အချိန်စောနေသေးရင် ရုံရှေ့က ပလပ်ဖောင်းတွေမှာထိုင်စောင့်ရင်း ဖြတ်သွားသမ ျှ ကားနံပါတ်တွေလိုက်ပေါင်းပြပါချစ်သူ။
ရုပ်ရှင်ပြီးရင် ရွှေတောင်တန်းလမ်းက စကားဝါမှာကြေးအိုးသွားစားမယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ဝက်ကြေးအိုး ရိုးရိုး အရော ၂ ပွဲ။
နောက်မှရောက်မယ့် ရှင့်ပန်းကန်ထဲက အသဲနဲ့ကလီစာတွေကကျုပ်ဝေစု။
ကျုပ်ပန်းကန်ထဲက ငုံးဥ ၂ လုံးနဲ့အသားလုံးက ရှင့်ခွဲတမ်း။
ကြေးအိုးစားပြီး ဖရူတို တစ်လုံးမှာပါ။
အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလေ ျှာက်ပြန်ရင်း
Steve Job ၊ Dota2၊ စကြာဝဠာ ၊
SUNDEW ၊ နည်းပညာ၊ ဟစ်တလာ ၊
ကမ္ဘာစစ်တွေ ၊ မြန်မာခေတ်တွေ
စသဖြင့် စသဖြင့် စသဖြင့်
သိမ်ဖြူမီးပွိုင့်က ပလပ်ဖောင်းမှာ ခဏထိုင်နားမယ်လေ။
အညောင်းပြေတဲ့အခါ ဆက်လေ ျှာက် ၊
ကျုပ် အိမ်အောက်ရောက်တဲ့အခါ တာ့တာပါ။
Posted on July 12, 2016 July 18, 2018 by admin
ကိုယ်စီ လိုအပ်မှုကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။
တစ်ယောက်တည်း အဆင်ပြေပြေ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ ကိုယ်စီ ဘဝတွေမှာ
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခင်တွယ်တာ ၊ မေတ္တာရှိလွန်းလို့သာ
သံသရာဆုံးတိုင် လက်တွေတွဲဖို့ အားထုတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေကြတာမဟုတ်လို့
“တစ်ယောက်မရှိမှာ တစ်ယောက်သေမလောက်အောင်ကြောက်တယ်” ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေထက်
အရင်ထွက်သွားမယ့်သူက ဘယ်လိုတွေအကောင်းဆုံး တာဝန်ကျေသွားရမလဲ”ဆိုတာတွေပဲ